Real Madrid oo dooneysa in aduun dhan 50 million euros iyo xidig muhiim ka ah safkeeda ay kula soo wareegto Mauro Icardi – Gool FM
Dajiye August 13, 2018
(Real Madrid) 13 Agoosto 2018. Madaxweynaha kooxda Real Madrid Florentino Perez ayaa wuxuu wali doonayaa in uu garoonka Santiago Bernabéu ka fasaxo goolhaayaha xulka qaranka Costa Rica ee Keylor Navas.
Florentino Perez ayaa wuxuu doonayaa in Keylor Navas uu qeyb kaga dhigo qorshaha uu ku doonayo in kooxda reer Talyaani ee Inter Milan uu kala soo saxiixdo Mauro Icardi.
Mauro Icardi ayaa ka mid ah weeraryahanada ugu wanaagsan horyaalka Serie A ee dalka Talyaaniga iyo guud ahaan aduunka.
Si ay u helaan saxiixa Mauro Icardi, Real Madrid ayaa u bandhigtay kooxda Inter Milan aduun lacageed dhan 50 million euros iyo sidoo kale adeega Keylor Navas, sidaas waxaa laga soo xigtay wargeyska reer Spain ee Don Balón.
Mauro Icardi ayaa la fahansan yahay in wax weyn uu ka tari doono weerarka Real Madrid, kadib bixitaanka Cristiano Ronaldo, waa hadii ay labada kooxood ku heshiiyaan saxiixa laacibka reer Argantina.
RASMI: Inter Milan oo soo xero galisay Keita.....+SAWIRRO
"Waxaan rajeynayaa in Ronaldo uu guulo waaweyn la gaari doono Juventus sida uu soo sameeyay sanooyinkii lasoo dhaafay":.. Buffon